ကြို့ထိုးပြန်ပြီလား…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကြို့ထိုးပြန်ပြီလား….
Posted by kuroko on Dec 27, 2011 in Copy/Paste | 25 comments
လူတော်တော်များများ ကြို့ထိုးဖူးကြပါလိမ့်မည်။ ဘာမျှမဟုတ်သော်လည်း အတော်လေး နေရထိုင်ရခက်ကာ လူသူကြားထဲရောက်လျှင် လွန်စွာမှ ရုပ်ပျက်ရပါတော့သည်။
သည့်အတွက် ကြို့ထိုးပျောက်ကင်းအောင် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြည့်ကြ၏။ အချို့က အသက်အောင့်၍ ရေကို ခုနှစ်ကြိမ် တဂွပ်ဂွပ်သောက်ကြ၏။ ပျောက်သူတို့ပျောက်ကြ၏ အချို့က ကြိုးထိုးနေသူ၏ လျှာကို ဆွဲ၏။ အချို့က ကြို့ထိုးနေသူ ထိတ်လန့်သွားအောင် ပြုလုပ်ကြ၏။ ပျောက်သူတို့လည်း ပျောက်ကြပါ၏။
အကယ်တန္တု ဘာပဲလုပ်လုပ် ကြို့ထိုးမပျောက်ပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရပါမည်နည်း။
ငရုတ်ကောင်းစေ့များကို မီးကင်ပါ။ (၀ါ) အိုးကင်းပူ ဒန်အိုးဖုံးပေါ်တွင် တင်၍ လှော်ပေးပါ။ ထိုအခါ ငရုတ်ကောင်းငွေ့များ ထွက်လာပါလိမ့်မည်. ထိုအငွေ့အား ကြို့အဆက်မပြတ်ထိုးနေသူအဖို့ ရှူရှိုက်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုင်း…. ကြို့ထိုးခြင်းဝေဒနာကြောင့် ဖြေသာမရသူများ လက်တွေ့စမ်းသပ် ကုသကြပါကုန်လော့။
Forward မေးလ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်….
has written 37 post in this Website..
View all posts by kuroko →
ဖော်ဝပ်တွေ သိပ်များနေပြီ အရပ်ကတို့ရေ..
မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်မတင်တော့ပါဘူး..စာအရေးအသားမကောင်းလို့ သူများပို့လာတာလေးတွေပြန်မျှပေးတာပါ…တောင်းပန်ပါတယ် မဆူး…
Bro. kurokoရေ ….
ဂေဇက်မှာ ဖော်ဝပ်မေးများတင်ခွင့်မရှိလို့ စည်းကမ်းလေးရှိနေလို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ ရွာသဘာရင့်တွေလည်း (မသိမသာ) ဖော်ဝပ်တွေ၊ အွန်လိုင်းသတင်းတွေ
တင် နေကြပါတာပါဘဲ။ ဖတ်စေချင်၊သိစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ပေါ့နော်။
အဲဒီတော့လုပ်သင့်တာက (ဖြစ်နိုင်ရင် ဖော်ဝပ်မေးကတဆင့်) မူရင်းဆိုဒ်ကိုဖော်ပြရေးသားပြီး ခရက်ဒစ်
(ကျေးဇူးတင်ခွင့်တောင်းလွှာရေးပြီး)နဂိုရှိပြီးသား ဖော်ပြချက် ကို ကိုယ်ရဲ့ ဝေဖန်မှု၊အကြံပေးမှု၊အမြင်
ကျနော်ကတော့ ရေးသူရဲ့ စေတနာပေါ်ဖို့အဓိကလို့ဘဲထင် ပါတယ်။
မဟုတ်ဟုတ်က အရေမရ အဖတ်မရ လည်းမဟုတ်။
လူတိုင်းသိပြီးသားသတင်း ၊အွန်လိုင်းမှာဘယ်သူဝင်ကြည့်ကြည့် ကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာ
မျိုးလည်းမဟုတ် ပါဘူး။လူတဦးတယောက်အတွက် အကျိုးရှိမဲ့သဘောဆောင်တယ်ဆိုရင် တင်သင့်ပါတယ်။
သူများမကောင်းကြောင်းရေးထားတွေ၊ ဖတ်ပြီးဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့စာမျိုးတွေထက်တော့ “သာ”ပါတယ်။
ပွိုင့်အတွက်ပြောစရာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလို “အကျိုးရှိမဲ့စာ”လေးအတွက် ကျနော့ပွိုင့်ကနေနှုတ်ပါလို့
(ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်လေးတွေ မြန်မာလိုရေးနိုင်ဖို့ “ဘားဂလစ်” နဲ့ရေးလို့ရတဲ့ ဆိုဒ်ကလေးပါ။အဲဒီ ဆိုဒ်ကလေးကို
အသုံးပြုပြီး အကျိုးပြုစာပေများ ဂေဇက်ကို ချီးမြှင့်ပေးပါအုန်းလို့ လေးစားသမှုဖြင့် နွေးထွေးစွာပြောကြားပါရစေခင်ဗျာ)
အားပေးနေပါတယ်..forward ဖြစ်နေလဲ ဘာဖြစ်လဲဗျာ..
ကိုသစ်မင်းနဲ့တူးတူးတို့ကို နားလည်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ….
အသုံးဝင်တဲ့နည်းလေးတခုပါပဲ။ မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ဖြစ်လာရင်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မတော်မတဲ့ ချော်ချဲ့လို့ ကြို့ ထိုးတဲ့အခါကြ
သုံးကြည့်ရမယ့် နည်းတစ်ခု ပေါ့ဗျာ
တီချာဆိုရင် သိပ်ကြို့ ထိုးတတ်တယ်။ နည်းမျိုးကိုစုံနေတာပဲ သိလား။
(၄) တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြောထုခိုင်းခြင်း
(၅) လျှာ လေတိုက်ခံရန်ထုတ်ထားခြင်း
(၆) ခေါက်ဆွဲစားပန်းကန်ထဲ ရေထည့် အပေါ်မှာ တူသုံးချောင်းတင်ပြီး နေရာလပ်မှ
(ရ) နှာခေါင်းပိတ်ပြီး နားကလေထွက်အောင် မှုတ်ထုတ်ခြင်း
အခု ကူရိုကိုရဲ့  ငရုတ်ကောင်းစေ့များကို မီးကင်နည်းကို သုံးပါမည်။ ကျေးဇူးပါနော်။
ဒီနည်းကတော့ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ဖူးသူတွေက ပိုသိပါလိမ့်မယ် ။
ကျွန်တော် သိထားတာကတော့ ….ကြို့ထိုး …ရင် …..စွပ်စွဲကြည့်လိုက်ပါ ။
ဥပမာ…..ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ က သိပ်ပြီး မခင်သေး…ရင်းနှီးတာ မကြာသေးဘူးလို့ 
ဆိုကြပါဆို့ …..တနေ့ သော ညနေခင်းမှာ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် အရက်ဆိုင်ကိုသွားပြီး
ပြသနာက….ခင်ဗျားက ညနေစာကို မစားခဲ့ဘူး…
အစာမစားပဲ အရက် သောက်တော့ အခန့် မသင့်ရင် ကြို့ထိုးတတ်တယ် ….
ဘယ့်နှယ် ခင်လို့ မင်လို့ပထမဆုံး အနေနဲ့ အရက် လာသောက်ပါတယ် ဆိုမှ….
တ အွတ်…အွတ်….နဲ့ …..
ကျွန်တော်။။။။။။။။။….ဘာမှ ဗျတွေ ဘာတွေ လုပ်မနေနဲ့ခင်ဗျားကို ကျုပ် ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်။
ခင်ဗျား။။။။။။။။။။။။။…..အွတ်…..အင် ????……..ဘာကို ပြောတာလဲ…..။
ကျွန်တော်။။။။။။။။။…..ဟေ့လူ …အတိတ်မေ့သလို ရွှေပျောက်သလို လုပ်မနေနဲ့ ….တကယ်ပဲ
ခင်ဗျား။။။။။။။။။။။။။…..နေပါဦး ကျွန်တော် နဲ့ ခင်ဗျားနဲ့ ခင်တာ ဒီနေ့ မနက်ကဟာကို…..
ကျွန်တော့်ကို ဘယ်မှာ မြင်ဖူးလို့ လဲ….။
ခင်ဗျား။။။။။။။။။။။။………နိဂိမိ….အဲလိုတော့ မလုပ်နဲ့ လေ………ဘာကို ပြောတာလဲ ဆိုတာ
ကျွန်တော်။။။။။။။။……. ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး…….လောလောဆယ် ခင်ဗျား ကြို့ထိုး တာ ပျောက်သွား
အပေါ်ကမန်းထားတဲ့ nigimi77 နည်းနဲ့အတူတူပါဘဲ…
ကြို့ထိုး တတ်သလား …??
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ဟာ မရည်ရွယ်သော အကြောင်းတစုံတရာကြောင့်သာ ကြို့ ထိုးကြတာဗျ..
တယောက်ယောက်ကများ ..ခုနေကြို့ထိုးပြ ဆိုလျင် ထိုးပြနိုင်သူ ရှားပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
စမ်းကြည့်မလားဗျ ….ကြို့ ထိုးနည်း …
ပိုစ့် အသစ်ရေးတင်လိုက်ပါမယ်နော ….
ကြို့ ထိုးတတ်တဲ့ ရောဂါရှိတယ် အပူအစပ်စားတဲ့အခါနဲ့ ငရုတ်ကောင်းစားရင် ထိုးတယ် ငရုတ်ကောင်းများတဲ့မုန်တီများသောက်မိလို့ကတော့ မဆုံးတော့ဘူး
77 နည်းနဲ့ကြုံဖူးတယ် ပိုက်ဆံခိုးတယ်ပြောလို့ ဒေါသတွေထွက်လာပီး ဆက်မထိုးတော့ဘူး ဒေါသထွက်လာတော့ ကြို့ ထိုးဖို့မေ့သွားတာတဲ့
ဒါကတော့ ဒီရွာမှာ ထုတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းပါ။ ဘေးမှာလည်း ဖွင့်လိုက်တဲ့ စာမျက်နှာတိုင်းမှာ ပေါ်နေတယ်။
အခု ပိုစ်တင်တဲ့ သူက ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ သတိထားမိသလောက် ဖော်ဝပ် မေးထဲက ရတာပါ ဆိုတဲ့ ပိုစ်တွေ ဆက်တိုက် တင်တာတွေ့တွေ့နေလို့ သိပ်စကားများများ မပြောချင်လို့ သဘောလောက်ပြောလိုက်တာပါ။
အားပေးတဲ့ လူနဲ့ လက်ခုပ်တီးတဲ့ လူတွေ ရွာ သမိုင်းကြောင်းပြန်လှန်ပြီး ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်။
ရွာထဲမှာ တနေ့တနေ့ ဖော်ဝပ်မေးနဲ့ အလွယ်ရတဲ့ သူများဆိုဒ်က ကူးလာတာတွေ တင်တင်လွန်းလို့ အမုန်းခံ အော်ခဲ့လွန်းလို့ ဖော်ဝပ်မေး တင်တာတွေ ကူးချတာလာတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတာပါ။
ဖော်ဝပ်မေးထဲက တင်ချင်တယ် ဆိုရင် ဖိုရမ်ထဲမှာ တင်ဖို့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ပြသနာလည်း တော်တော် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ရွာထဲမှာ အမုန်းခံ အော်နေတဲ့ သူတွေရှိလို့ ဒီရွာမှာ ဒီလို ဟင်းကောင်းနဲ့ စားပွဲကောင်းကောင်း စတုဒီသာ အလှူပွဲ ဆိုတာ ရှိနေတာပါ။
အမှိုက်က အစ ပြသာဒ် မီးလောင် ဆိုတဲ့ စကားကို အမြဲ အလေးထားပါတယ်။ ရွာထဲက သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးကြီး ကိုပေါက် ရေးတဲ့ စာမူတောင် ခပ်တည်တည် နဲ့ ခိုးကူးလာပြီး ရွာထဲမှာ ပြန်တင်တယ်။ ကိုယ်တိုင် ခံစားရေးတဲ့ လူက ကွန်မန်းတောင် သိပ်မရဘူး။ ခိုးကူးလာတဲ့လူက ကွန်မန်းတွေ အများအပြားရလို့.. အဲဒီလိုဆိုရင် ဘယ်လိုနေကြမလဲ.. ကိုယ်စိုက်တဲ့ အသီး သူများ ခိုးပြီး ဖြန့်ဝေနေတာကို စားတဲ့လူက သူခိုးကို သူခိုးမှန်း မသိပဲ ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေလို့တောင် မေတ္တာပို့နေမယ် ဆိုရင် အပင်ပိုင်ရှင် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ.. ငါ့ဟာ ခိုးပြီး ဒီကောင် ကောင်းစားနေတယ်လို့ ပြောမှာပေါ့။
အခု ပိုစ်တင်တဲ့ သူကိုတော့ အားနာပါတယ်။ လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးတဲ့ သူတွေကိုပြောချင်တာပါ။
ဖော်ဝပ်မေးတွေ မတင်ဖို့ တားမြစ်ထားတာကို စည်းကမ်းအတိုင်း မတားမြစ်တဲ့ သဂျီးကိုလည်း ပြောချင်တယ်.. ကြပ်မတ်မလား ဆိုက်မှာ ဆူး ရဲ့ အွန်လိုင်း မိတ်ဆွေတွေကို ၁၀ယောက်လောက်ကို တနေ့ ၅ပုဒ် ခပ်တည်တည် နဲ့ တင်ပေးပါဆိုပြီး တင်ခိုင်းရင်တောင် တနေ့ အပုဒ် ၅၀ အရည်မရ အဖတ်အရ စာမျက်နှာပြည့်ပြီး အပေါစား စာတွေနဲ့ ပြည့်သွားအောင် လုပ်လိုက်လို့ ရတယ်။ သဂျီး သေချာ ကိုင်တွယ်ပါ။ ဒါပဲ ပြောချင်တယ်။ ဒီတခါတော့ ဒုတ် ဓါး မကျိန်းဘူး တကယ်လုပ်မှာ..
ကိုသစ်မင်း အပါအ၀င် အားပေးတဲ့ လူနဲ့ လက်ခုပ်တီးတဲ့ လူတွေ ရွာ သမိုင်းကြောင်းကို
ဒီအောက်မှာ ပါတဲ့ Link ကို ဖတ်ပြီး လှန်ကြည့်ကြ ။
ဒါက တကယ့်ကို ပါးပါးလေး ပုတ်ထားတာ ။
ထွက်လာတဲ့ အပေါက်ခြင်း အတူတူနဲ့ အနူနူကို ဘာ တစ်လုံး ပိုရှုတယ် ဆိုလား ။
ရွာထဲက သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးကြီး ကိုပေါက် ရေးတဲ့ စာမူတောင် ခပ်တည်တည် နဲ့ ခိုးကူးလာပြီး ရွာထဲမှာ ပြန်တင်တယ်။
ဒါက သက်သေပဲ ။
အခုလိုမျိုး ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ၀တ္ထုတို တပုဒ် ဖတ်ဖူးတယ် ဆူးေ၇။ ဆရာဖေမြင့်ရေးတယ် ထင်တာပဲ။
ဖော်ဝပ်မေးတွေ မတင်ဖို့ တားမြစ်ထားတာကို စည်းကမ်းအတိုင်း မတားမြစ်တဲ့ သဂျီးကိုလည်း ပြောချင်တယ်
ကြပ်မတ်မလား ဆိုက်မှာ ဆူး ရဲ့ အွန်လိုင်း မိတ်ဆွေတွေကို ၁၀ယောက်လောက်ကို တနေ့ ၅ပုဒ် ခပ်တည်တည် နဲ့ တင်ပေးပါဆိုပြီး တင်ခိုင်းရင်တောင် တနေ့ အပုဒ် ၅၀ အရည်မရ အဖတ်အရ စာမျက်နှာပြည့်ပြီး အပေါစား စာတွေနဲ့ ပြည့်သွားအောင် လုပ်လိုက်လို့ ရတယ်။
ဟုတ်ကဲ့……အရေမရ အဖတ်မရဆိုတာ ဒါမျိုးကိုများ ပြောတာလား ခည ။
သဂျီး သေချာ ကိုင်တွယ်ပါ။ ဒါပဲ ပြောချင်တယ်။ ဒီတခါတော့ ဒုတ် ဓါး မကျိန်းဘူး တကယ်လုပ်မှာ..
ကြားလား သဂျီး ။ အမြန် ကိုင်တွယ်လိုက်ပါ ။ တကယ် လုပ်မယ်ဆိုပဲ ။
ဆူး ရဲ့ အွန်လိုင်း မိတ်ဆွေတွေကို ၁၀ယောက်လောက်ကို တနေ့ ၅ပုဒ် ခပ်တည်တည် နဲ့ တင်ပေးပါဆိုပြီး တင်ခိုင်းရင်တောင် တနေ့ အပုဒ် ၅၀ အရည်မရ အဖတ်အရ စာမျက်နှာပြည့်ပြီး အပေါစား စာတွေနဲ့ ပြည့်သွားအောင် လုပ်လိုက်လို့ ရတယ်။ သဂျီး သေချာ ကိုင်တွယ်ပါ။ ဒါပဲ ပြောချင်တယ်။ ဒီတခါတော့ ဒုတ် ဓါး မကျိန်းဘူး တကယ်လုပ်မှာ..
အိမ်မှာ ကြို့ထိုးရင် အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေ
တကယ်လို့ အပြင်မှာ၊ ရုံးမှာ၊ စာသင်ခန်းတွေမှာ ကြို့ထိုးရင်ရော.. ဟင်
၀ါသနာ ပါရင် ကြိုက်တာ ၀င်လုပ်ကြ..
လူဆိုး လုပ်ရတာ လွယ်တယ်.. တခါ ဆိုးပြီးရင် အမြဲ လူဆိုး တယောက် အနေနဲ့ ရပ်တည်လို့ ရတယ်။ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကလို့ ရတယ် သူက လူဆိုးပဲ..
လူကောင်းအဖြစ် အမြဲ ရပ်တည်ရတာသာ ခက်တာ.. လူကောင်းတယောက် တခါဆိုးတာနဲ့ နာမည်ပျက်တာပဲ..
ကိစ္စတော့ မရှိဘူး.. ပျော်လွန်းလို့ ကဲချင်သူတွေ ဆန္ဒ အတိုင်း အပေါင်းအဖော် နဲ့ကို ၀ိုင်းတွယ်ပေးမယ်။
ဈေးဆိုင်ပေါ်မှာ အာလူး တွေ လတ်လှ သန့်လှ မထင်ကြနဲ့ အဲဒီ အာလူးတွေ သန့်အောင် ဆေးတဲ့ လူ မရှိရင် မြေကြီးတွေ ပေကျန်နေမှာပဲ.. သန့်လှပြီ ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူမနေနဲ့ စေတနာပါလို့ သန့်တဲ့ အထဲ ဖြစ်နေတာ.. စေတနာ မပါပဲ ပြီးပြီရော ဆိုရင် ဒီတိုင်းရမလား။
ဆူး စိတ်ဓါတ်ကတော့ ဒါပဲ.. ထင်ချင်သလိုသာထင်.. ဘယ်သူမှလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး.. ဒီရွာက လူတွေ ဆူး ဆိုတာ ဘယ်လို စိတ်ဓါတ် ရှိတယ် ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိတယ်။
တခုလေးတော့ ၀င် ပြောပါရစေ..နော်..
တခါတလေ ပို့စ်လေး တခုတင်နိုင်ဖို့ကို အတော်စဉ်းစားရတယ်ဗျ..
ကိုယ်တိုင်ရေးစာ ၊ ဘာသာရေးကင်းရန် ၊ အကျိုးမရှိတောင် အကျိုးမမဲ့ရန် သေချာစဉ်းစားရသေး..
အဲလို လဲတင်ပြီးရော..ကိုယ့်နောက်ကနေ ဘယ်နှစ်ပို့စ် တက်လာပြီး ကိုယ့်ကို ကန်ချမလဲ စောင့်ကြည့်ရပြန်ရော..
သူတို့ကို ပြန်ကန်ချဖို့ ကျတော့ ကိုယ်က တပတ်လောက်စဉ်းစားရပြန်ရော..ဟူး မောထှာ
အဲဒီတော့ ကျွန်တော် ကတော့ ဖော်ဝပ်တွေများလာမှာ ကို ကြောက်တယ်..
နောက်တခုက ဖိုရမ်မှာ တင်ရင်လည်း ပိုက်ပိုက်နဲနဲပေးလိုက်ဗျာ.. အဟိ
ထင်ချင်သလိုသာထင်.. ဘယ်သူမှလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး.. ဒီရွာက လူတွေ ဆူး ဆိုတာ ဘယ်လို စိတ်ဓါတ် ရှိတယ် ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိတယ်။
အားလုံးကို xxxxxx ပဲ…..။ ရှုးတိုးတိုး………ဒို့အော်မေ့ ဂိုဏ်းသူားတွေကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ။
ယောင်းမရယ်….ညဉ်းတို့ နဲ့ ကျုပ်တို့ က ဆေးပေးမီးယူဒွေပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ် …..။ ခွိခွိ
ဟဲ့….ဟို စိုင် မုဆိုး……….နင့် မြင်း ခဏ……
အကိုပြောမှဘဲ သူစိတ်ထားပုပ်တာ ကို ကိုတိုင် ကျလုပ်ပြီးသူများကျ ပြောတတ်တာ
မနာလိုတတ်တာ ဆရာမကြီးလုပ်တာ သူထိန်းလို့ဘဲ mandalay gazette ကကောင်းနေရသ
လိုကြွားတာ မရေမရာတွေ ရေးတတ်တာ အကုန်လုံးကိုဆွဲဖြဲပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိတာ
ဘဝင်မြင့်နေတာသိရပါတယ် သူရေးတဲ့ ကွန်မန်းတွေကလဲ ဟီးဟီးဟားဟားကွန်မန်းတွေ ဆရာလုပ်တာ
တွေများတယ် ရေးသူကို အပေါ်စီးကပြောတာများတယ် စေတနာမတွေ့ရပါဘူး
အမလေး ကြောက်စရာတယ်ကောင်းပါလား အားလုံးကိုကြိမ်းလားမောင်းလားနဲ့ သူ့ထက်ကြီးသူတွေကို
လဲ ဂါရဝ တရားမရှိဘူး အပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းပြပေးထားတာက လူကြီးတွေလေ
mandalay gazette မှာသူ့ထက်တော်တဲ့ ရေးသူတွေအများကြီးရှိနေတာတွေ့ပါတယ် စိတ်သဘောထား
တွေလဲပြည့်ဝကြတယ် လူကြီးဆန်ကြတယ် ကူညီကြတယ်
လူသစ်တွေအတွက် လန့်စရာကောင်းသောလူတယောက်ကိုဖော်ထုတ်ပေးလို့ အကို့ ကိုလေးစားပါတယ်
ကိုပေါက် ရဲ့ ရှင်းတမ်းလေးပါ။
အဲဒီ လင့်ကလေးကို အစ အဆုံး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့.. သမိုင်းကြောင်း လှန်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာ..
သူတပါး အပုပ်ချပို့ ကိုလိုရာ တွေးမယ်ဆိုလည်း
၂၀၁၀ တုန်းက ရေးခဲ့တာ ကွန်မန်းနော်.. မြင်အောင် ရှာသွားဖတ်ကြည့်သင့်တယ်။
ဒီပုံပြင်ကလေးက အရင်က အသုံးလုံး စာတတ်မြောက်ရေး အတွက်ထုတ်တဲ့ စာအုပ်ပါ။ စာဖတ်ချင်တဲ့ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားတဲ့ ပုံပြင်ပါ။ ဒီမှာ ပျင်းနေလို့ ချရေးလိုက်တာ
အဲဒါမျိုးပေါ့ လိုရာ ဆွဲတယ် ဆိုတာ.. သေချာ အစအဆုံး ဖတ်ကြည့်လိုက်အုန်းမှီရေးတဲ့ ကွန်မန်း အစအဆုံး ပြန်ကူးပေးလိုက်တယ်။
hmee says: (Edit)
အခုလိုမျိုး ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ၀တ္ထုတို တပုဒ် ဖတ်ဖူးတယ် ဆူးေ၇။ ဆရာဖေမြင့်ရေးတယ် ထင်တာပဲ။ အဖွားကြီးသေလို့ အဖိုးကြီးက ငိုတာ မတိတ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ၀မ်းမနည်းပါနဲ့ အဖိုးရယ်ဆိုပြီး ၀ိုင်း နှစ်သိမ့်တော့။ ငါ သူ့အတွက် ၀မ်းနည်းတာ မဟုတ်ဘူး ငါ့အတွက်တဲ့။ ဒီအဖွားကြီး သေရင်စောစောသေတာမဟုတ် သန်တုန်းမြန်တုန်းဆို နောက်တယောက်ထပ်ရဦးမယ်။ အခုလို အိုမှ သေမယ်ဆိုလည်း ငွေတွေ ထားခဲ့ပေါ့ အခုတော့ သူ့ကု၇တာနဲ့ကုန်ပြီ။ ဟိုဘက်လမ်းက အဖိုးကြီးဆို အသက်ကြီးပေမဲ့ ငွေရှိတော့ အငယ်လေးရသေးတာ ငါ့မှာတော့ အသက်ကကြီး ငွေမရှိနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်နောက်တယောက် ရမှာတုန်း ဒါကြောင့် ငါ့ကိုယ်ငါ သနားလို့ ငိုတာဟဲ့တဲ့။ အဲ့ ၀တ္ထုတိုလေး ဖတ်တုန်းကလည်း သဘောကျလိုက်တာ အရမ်းပဲ။
မှီရေးတဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် တူတယ် ဆိုတာ သူ့ဖတ်ဖူးတာနဲ့ တူတာ..
ခပ်ဆင်ဆင် တူတယ်ဆိုတိုင်း ကော်ပီ ထင်နေလား..
ဘေးအိမ်က ရန်ဖြစ်တာ နောက်နေ့ တဖက်အိမ်က ရန်လိုက်ဖြစ်တာ ကော်ပီ ကူးတာလား..
တနေ့ထဲ ရုပ်သံလိုင်းက ပြတဲ့ ရုပ်ရှင်တလိုင်းတည်းကို တပြိုင်တည်း ကြည့်ကြတာ ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်.. တအိမ်နဲ့ တအိမ် အတုခိုးတယ် ဖြစ်နေမယ်။
အကြောင်းအရာ အချိန်အခါ နဲ့ လိုက်ပြီး ခေတ်စားရင် ခေတ်စားသလို ထင်ရှားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပိုစ်တင်ကြတာ သိကြပါတယ်။
ပိုစ်တိုင်းမှာ တင်တဲ့ ရက်စွဲ ရှိသလို ကွန်မန်းတိုင်းမှာ တင်တဲ့ ရက်စွဲ ရှိတယ်။
အဲဒီ တုန်းက ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ ဆိုတာ မှတ်တမ်းပဲ။
အဲဒီ နိုင်ငံတွေ တကယ်ရောက်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး လူပုံနဲ့ တွဲပြရင်တောင် ဓါတ်ပုံပညာနဲ့ လုပ်တယ် ထင်ချင်ထင်နေအုန်းမယ်။
အစိုးရနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေ သတင်းတခုအပေါ် ရေးတာခြင်း မတူသလိုပေါ့..
ကျန်တာကတော့ တွေးချင်သလိုသာ တွေးပေတော့..